Философия | Полезная информация для всех - Часть 2
Почему светятся звезды? Им не лень … Отражают мощь СОЛНЦА… От термоядерного синтеза. Потому что они все — Солнца! Только очень далеко от нас и кажутся маленькими. значит это комунибудь…
အဘယ်ကြောင့် Blizzard "Blizzard" အမည်ရှိခဲ့သလဲ
Почему метель “метелью” назвали ? потому что тебя назвали человеком Потому что она метет, как метла.Источник информации — собственная голова.Е фото смотри на аватарке. Сильная метель. Сильная метель (ГОСТ Р…
အဘယ်သူသည် Cagliostro Count taoy ???
အဘယ်သူသည် Cagliostro Count taoy ??? Giuseppe Balsamo, Cagliostro (1743 1795) ကနာမည်ကျော်အီတလီစွန့်စား Count ။ ငါအဂ္ဂိရတ်, မှော်, အနာရောဂါငြိမ်းစရာအတွက်စေ့စပ်ဥရောပ၌တစ်တွေအများကြီး, ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ရှေးခေတ်အီဂျစ် Mason တည်းခိုထူထောင်မိမိနှင့်မဟာဟစျကျွောကွ ...
ဟီရိုရှီးမား, Nagasaki မှာကဗျာပစ်။ သို့မဟုတ်နျူကလီးယားစစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခု။ ဒါဟာမိုးသည်းထန်စွာ, ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောဤကျမ်းပိုဒ်ကိုညွှန်ကြားရန်လိုအပ်ပေသည်။
ဟီရိုရှီးမား, Nagasaki မှာကဗျာပစ်။ သို့မဟုတ်နျူကလီးယားစစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခု။ ဒါဟာမိုးသည်းထန်စွာ, ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောဤကျမ်းပိုဒ်ကိုညွှန်ကြားရန်လိုအပ်ပေသည်။ ငါ EVTUSHENKO မိကြ .... ထိုအ 1965 HirosimaRobert ခရစ္စမတ်စီးတီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျော်ကြားဖြစ်လာသည့်အက်တမ်ဗုံးနှစ်: Vyshelvoenny ...
Что значит, когда говорят "всему свое время"?
Что значит, когда говорят "всему свое время"? Буквально-не следует спешить, торопить события. Это отговорка тех, у кого нет ни сил, ни средств. Все масштабные события нашей жизни предопределены судьбой и…
ထိုအ sokratiki အဘယ်သူနည်း
ထိုအ sokratiki အဘယ်သူနည်း သန့်ရှင်းသောလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုခုကိုသိသူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူများ,! အဆိုပါ IV ရာစုဘီစီဆိုကရေးတီး၏ကျောင်းသားအားဖြင့်အတွေးအခေါ်ကျောင်းများဆိုကရေးတီးကျောင်းတွင်။ အီး။ ထိုကျောင်းများမှကိုယ်စားလှယ်များဟုခေါ်ကြသည် ...
မိမိအမစ်ရှင်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ရှင်းပြဆိုကရေးတီးနှင့်ဒီမိုက၏ဒဿန၏အခြေခံအတွေးအခေါ်များ, ဆိုကရေးတီးသူဟေလသလူများ၏အသိဉာဏ်အရှိဆုံးသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုဗျာဒိတ်ဌာနတော်ကိုးကား။ ထိုအခါကိုချေပရန်အတွက်မထင်မှတ်ဖော်ပြချက်တွေးခေါ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုစီးရီးအောက်ပါအတိုင်း ...
တစ်ဦးဇာတ်ကြောင်းကဘာလဲ? ရိုးရှင်းစွာလိမ္မာပါးနပ်နဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်လင့်များဖြစ်ရန်မကြိုးပမ်းရှင်းပြပေးပါ။ အလွန်ဘောလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တစ်ဦးဇာတ်ကြောင်းကဘာလဲ? ရိုးရှင်းစွာလိမ္မာပါးနပ်နဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်လင့်များဖြစ်ရန်မကြိုးပမ်းရှင်းပြပေးပါ။ အလွန်ဘောလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူ့ဟာသူသည်ဇာတ်ကြောင်းကျယ်ပြန့်အသုံးချနှင့်လူအနည်းငယ်ကသာမလိုအပ်နေသည် ...
Какая разница между Объектом и Субъектом ??? Объект — это тот кто что-то производит, делает, а субъект это тот, кто является принимающей стороной или ему что-то делают, или на нем…
အဘယ်ကြောင့်ကောင်လေးကဆိုသနည်း ထိုအခါလုလင်ကိုဘယျသူနညျး အဆိုပါလူကလေးလျက်, မီတာ။ 1 ။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးတစ်ဦးကလေးနှင့်လုလင်ကိုအကြားအလယ်အသက်အရွယ်။ မြင်းမြင်းစီးသူရဲကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စိုးစံနှင့်လူကလေးရဲ့အဖေပညတ်တော်တို့ကို။ Pshkn ။ ငါ ...
အဘယ်အရာကိုတကယ် Amityville အတွက်ဖွစျခဲ့သလဲ
အဘယ်အရာကိုတကယ် Amityville အတွက်ဖွစျခဲ့သလဲ ဤအိမ်တော်ကိုနေ့ညဉ့်တွင်အားနည်းမူအကျင့်, ပိုက်ဆံတွေအများကြီး? ဒါကြောင့်ပြီးသားခိုင်မြဲစွာအားလုံးမှာထိုင်စိတ်ထဲမှာအတွက်ကြော်ငြာထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ...
ဘာ immanence ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများအတွက်ကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပြ !!
ဘာ immanence ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများအတွက်ကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပြ !! တစ်ဦးအတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာဝတ္ထု, ဖြစ်ရပ်ဆန်းအတွက် Immanent မွေးရာပါ။ အီးကယ့်ကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စကဘာလဲဆိုတာအဘို့ဤအရာဖော်ဆောင်ရေး ...
စိတ်ကူးကဘာလဲ? ကြှနျတေျာ့စိတျထဲတှငျအကြံအစည်ဖြစ်ပါတယ် .... (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ) အခွအေနေ dushi.Mysl- ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကိစ္စနထေိုငျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ bol.Mysl- outshine နိုငျသညျ, သို့မဟုတျဓားစာခံ e.Mysl ဤအရေးကွီးစွမ်းအင်ကျင်းပလိမ့်-ပစ္စည်းထင် ...
ဟူသောဝေါဟာရကို "maieutics" ဘာသနည်း ထိုအခါသက်တမ်းရေးသားသူသောသူဖြစ်သနည်း
Что означает термин "Майевтика"? И кто автор термина? Автор Сократ, думаю.. . МАЙЕВТИКА (греч. maieutike повивальное искусство) метафора, с помощью которой Сократ прояснял сущность своего метода философствования, специфицирующего сократический диалог…
နက်နဲသောအရာကိုကဘာလဲ? (ဂရိ။ Mysterion စက္ကမင်မင်္, နက်နဲသောအရာကိုမှ) နက်နဲသောအရာ, ဥရောပအလယ်ခေတ်ဘာသာရေးပြဇာတ်ရုံ 1416 ရာစုနှစ်များစွာ၏အမျိုးအစား။ နက်နဲသောအရာတခုကိုအစောပိုင်းကထဲကနေပေါ်ထွက်လာ (913 cc ။ ) ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်၏ပုံစံထဲမှာ, ဝတ်ပြုမှုဒရာမာ ...
Чем неклассическая философия отличается от классической? не классическая — это ЖИЗНЬ, а классическая — это попытка уйти от жизни )))) Фамилиями. А может — ну их ?.. Классическая философия —…
Chekhov "ပဲရစ်" ။ ဤလုပျငနျးတှငျအဘယျသို့ themes များနှင့်ပြဿနာများကို? ကျွန်မဖတ်ပါနှင့် neponyatkah ပါပြီ
А. П. Чехов "Пари". Какая тематика и проблематика у этого произведения? прочитал и в непонятках Рассказ Пари построен по принципу дедуктивного доказательства: высказанный в начале тезис проверяется и опровергается экспериментальным…
ဗီတာမင် C ကို, ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, ကမစားသင့်တယ်နိုင်မလဲ? အဆိုပါမိကဘာလဲ။ နှင့် Maxi ထိုး ??
ဗီတာမင် C ကို, ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, ကမစားသင့်တယ်နိုင်မလဲ? အဆိုပါမိကဘာလဲ။ နှင့် Maxi ထိုး ?? လူတို့သညျအဘို့အဗီတာမင် C 90 မီလီဂရမ်၏ဗီတာမင်စီတရားဝင်အကြံပြုနေ့စဉ်ဆေးထိုး၏နေ့စဉ်စားသုံးမှုနှင့် ...
လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိက subsystem သို့ဘာတွေလဲ?
လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိက subsystem သို့ဘာတွေလဲ? လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိက subsystem သို့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တစ်ဦး subsystem သို့မရှိခြင်းပါ! မည်သည့်ရှုပ်ထွေးမှုစနစ်လိုပဲလူ့အဖွဲ့အစည်းအပြန်အလှန် subsystem ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ subsystem စနစ်ကိုယ်တိုင်ကထက်လျော့နည်းရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြောင်းအလယ်အလတ်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ကြသည်။ ...
နစ်ရှေးရဲ့အတွေးအခေါ်၏အခြေခံပြောပြပါ။ ဘဝနှင့်ဘာမျှမ၏ကခုန် .. နစ်ရှေး၏သွန်သင်ချက်တွေကိုအခြေခံအတွေးအခေါ်များ5ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်မစိုးရိမ်: 1)2ပါဝါရန်အလိုတော်)3မရဏဘုရားသခငျသညျ) Nihilism 4) ...
ယခင်စာမျက်နှာ စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2စာမျက်နှာ3... စာမျက်နှာ7Next ကို 's Page
52 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,321 စက္ကန့်ကျော် Generate ။